Shir looga Hadlayay Amniga iyo la dagaalanka Argagaxisada oo dowladda Puntland iyo QM ku dhex-maray Garowe[DHAGAYSO] – Radio Daljir
Abriil 20, 2015 12:15 g 0
Isniin, Abriil 20, 2015 (Daljir) — Shir degdeg ah oo ku saabsan ammaanka ayna ka qaybgaleen mas’uuliyiinta Puntland iyo wafti ka socda QM. Oo galabta soo gaaray Garowe ayaa galabta ilaa caawa ka socda xarunta madaxtooyada PL ee Garowe.
Shirkan ayaa waxaa goob jog ka ah M.weyne ku xigaha PL ahna ku simaha M.weynaha Eng. cXakiin X. Cabdullaahi Cumar “Camey” iyo wakiilka Qaramada Midoobey ee SomaliyaNicholas Kay oo hoggaaminayey waftiga UN-ka ee galabta Garowe yimid.
Wasiirka warfaafinta ee PL C/wali Xirsi Cabdulle ayaa goor dhaweyd oo caawa ah arrintaan uga waramay Radio Daljir, waxaana waraystay Maxamed C/laahi Cali Kooshin..
Madaxweyne Gaas oo Waraysi uu siiyay Daljir ku Canbaareeyay weerarkii Al-shabaab ee Garowe [DHAGAYSO]